‘राष्ट्रपति शासन र संकटकाल लागू गर्ने कुरालाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ’ – Bikash Khabar
मंगलबार, ०४ फाल्गुण २०७७ गते १८:२६ मा प्रकाशित	Author विकास खबर	Comment(0)	93 Views
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरूद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले ‘काशी जाने, कुटीको बाटो’भन्ने उखान चरितार्थ भएको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति शासन र संकटकाल लागू गर्ने कुरालाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको पनि कार्यक्रममा नेताहरुले बताएका छन्।
‘आफैँले प्राप्त गरेको दुई तिहाईको मतको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि आफू अध्यक्ष भएर पनि आफ्नो दलपनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, हुँदाहुँदा अब उहाँले हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने काम गर्नुभयो । र, हठात् निर्वाचनको घोषणा गर्ने जुन घोषणा भएको छ। हामी सबैले बुझेकै हौं। यो घोर निन्दनीय छ। यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। असंवैधानिक कदम हो । यो कदमको हामीले डटेर सामना र प्रतिकार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई कतैपनि संविधानमा त्यो अधिकार दिईएको छैन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती अधिकार प्रयोग गरेको भनेर विरोध गरेका छन्। पूर्व सभामुखहरुले पनि विरोध गरेका छन् । कानूनका विज्ञहरुले विरोध गरेका छन् । नागरिक समाजलगायत सबैले विरोध गरेका छन्,’ उनले भने।
कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए । ‘यो विषयमा बहस चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगलाई जबरजस्त चुनावमा जानको लागि सरकारले ताकेता गरेको सुनेका छौँ।’–उनले भने,‘यो कदम असंवैधानिक छ । निर्वाचन आयोगले आफैँले कुन कुन दलले भाग लिने भनेर टुंगो लगाएको छैन। निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना छैन। निर्वाचन हुँदैन।’
नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्नको लागि यो स्टेप नचालेको पनि दाबी गरे। उनले भने, ‘निर्वाचन गर्नको लागि यो स्टेप चालिएको होइन। मिति नतोकिकन प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाईँदैन्। उहाँले सरकार लम्ब्याउने र निरंकुश प्रणाली लागु गर्नको लागि यो कदम चाल्नुभएको हो।’
उनले चुनाव भयो भने कसले जित्छ वा कसले हार्छ भनेर अहिले हिसाबकिताब गर्न नहुने पनि सुनाए । उनले भने,‘कुन पार्टी वैधानिक हो ? कुन होइन ? त्यसको निर्क्योल निर्वाचन आयोगले पछि गर्ला। तर, अहिले ओलीको कदमको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनमा जाऔं। संसद विघटन गर्ने ओलीको यो कदम वैधानिक छैन। हामीले दशकौं लामो समयदेखि लडेर ल्याएको र प्राप्त गरेको उपलब्धि, संविधान र प्रणालीलाई हाम्रो तर्फबाट संयुक्त आन्दोलनको लागि पहल गरौं। यसको लागि वार्ता गरौं। यो कदमले संकटकालतर्फ लैजान्छ । अब देशलाई संयुक्त आन्दोलनले निकास दिन्छ। अहिले चुनाव भयो भने जितिन्छ कि भन्ने बेला होइन। यो कदमको विरोध गर्ने पक्षहरु एक ठाउँमा सडकमा आएर प्रतिवाद गरौं।’
उनले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको तीन वर्ष उपलब्धिविहीन भएको सुनाए। यद्धपि, प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै राम्रा काम भएको भनेर फेहरिस्त सुनाउने गरेको उनको आरोप छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको भनेर आफ्नो पार्टीले पहिल्यै नै ठहर गरेको र अहिले आन्दोलित रहेको सुनाए। भोलि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्ने सुनाए।
ढुंगानाले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर आफूहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउनेगरि संविधानमा व्यवस्था गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै कडा आक्रोश पोखे। उनले भने,‘हिजो हामीले अब आन्दोलन गर्न नपरोस, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि भनेर हाम्रा नेताहरुले रत्कपार्कमा भाषण गरेर हिँड्नभएको थियो। हामीले पनि त्यही चाहेका थियौं।
नेकपाको आन्तरिक झगडाको कारणले संसद भंग गर्न पाईँदैन् । देशलाई बन्धक बनाउन पाईँदैन्। अब अस्थिरता नहोस, संसद भंग नहोस भनेर संविधानमा कहीँ पनि संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भंग गरिदिए । काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ ? यो उहाँको कमजोरी हो नि । यो त राष्ट्र र जनताको कमजोरी होईन नि। मैले धेरै काम गरें भन्नुहुन्छ, अनि फेरि मलाई काम गर्न दिईएन भन्नुहुन्छ । यो दोधारे कुरा हो।’
देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । तर, त्यसको लागि अहिलेको व्यवस्था नै गलत हो भनेर दलहरुले विचार गर्नुपर्ने सुनाए।